घरमा श्रीमती भएका युवकले प्रेमीकालाई लिएर फुटबल हेर्न गए, घरबाट श्रीमती र परिवारले लाइभ देखे (भिडियो) - News20 Media
January 24, 2020 N20LeaveaComment on घरमा श्रीमती भएका युवकले प्रेमीकालाई लिएर फुटबल हेर्न गए, घरबाट श्रीमती र परिवारले लाइभ देखे (भिडियो)
काठमाडौं। तपाइका श्रीमती अर्कै युवतीसँग डेटमा वा फिल्म हेर्न वा फुटबट म्याच हेर्न गए तपाइृ के गर्नुहुन्छ ? अझ तपाईले आफ्ना श्रीमन अर्कैयुवतीसँग मस्की मस्की रोमान्स गरीररहेको दृश्य तपाईले लाइभ कार्यक्रममा घरमा नै देख्नुभयो भने तपाईको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ ? यस्तै दृश्य देखिएको छ इक्वेडरमा ।
इक्वेडरका देवेइ एन्ड्रेड नामका एक व्यक्तिले स्टेडियममा बसेर बार्सिलोना र डेलफिनको फुटबल खेल हेर्दा आफ्नी प्रेमीकालाई लिएर गएको दृश्य पत्निले घरमा लाइभ हेर्दा देखेपछि उनलाई यो काम निकै भारी भएको छ । फुटबल हेर्ने बाहनामा संसारलाई बिर्सेर बसेका ती व्यक्तिले अन्य कर्महरु गरिरहेका बेला क्यामेरा उनीतिर फोकस भएपछि उनी अप्ठ्यारोमा परेका हुन् ।
विबाहित प्रेमीले गरेको क्रियाकलाप ति युवतीले सहज रुपमा स्विकारेको दृश्य स्टेडियममा जडित ठूला क्रिनसँसै टिभीमा पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको थियो । र त्यो चटक ति युवककी पत्निले घरमा पनि देख्न पुगीन् । जुन भिडियो अहिले संसारभर भाइरल भइरहेको छ । यो दृश्य आफ्नै आँखाले देखेपछि पत्निले घर छोडेर गएको बताइएको छ ।
हुनेवाला बेहुलीलाई ४ दिनअघि टिप्परले कि’चेपछि प्रेमीले लेखे– नभुलेस् बूढी, म नि छिट्टै आउँछु !
फाईनलमा घटिया हर्कत देखाउने बांग्लादेशका तीन र भारतका दुई खेलाडीलाई आईसीसीले गर्‍यो यस्तो कार्बाहीमा
February 11, 2020 February 11, 2020 N20